Sidee taageerayaasha ganacsiga ee HVLS u baddelaan meheraddaada?
SHAQAALAHA QARANKA IYO MACAAMIISHA
Taageerayaasha saqafka sare ee ganacsiga HVLS ayaa qaboojiya hawada waxayna abuuraan dabeyl yareysa heerkulka wax ku oolka ah (sida kulul ee aad dareento) 8ºF. Taageerayaasha warshadaha waawayn waxay siiyaan raaxo jaban meelaha aan cimilada la dhigin iyo keyd lacageed oo xusid mudan meelaha qaboojiyaha leh.
Qoyaanka ayaa dhaawici kara badeecooyinka iyo qalabka isla markaana abuuri kara qatar. Wareega hawada ee joogtada ah wuxuu yareeyaa arimahan isaga oo isku daraya hawada wuxuuna ka hortagaa dhigaalka qoyaanka wuxuuna yareeyaa qoyaanka Taageerayaasha caadiga ah ee dabaqa ma ahan maadaama ay ka maqan yihiin wareegga joogtada ah ee taageerayaasha warshadaha iyo kuwa wax afuufa ay leeyihiin.
Waxsoosaarka ayaa hoos u dhacaya marka dadku kululaadaan si aan raaxo lahayn. Qulqulka hawada ee ay soo saaraan taageerayaasha warshadaha waaweyni wuxuu siyaadiyaa habka dabiiciga ah ee jirka ee qaboojinta-qaboojinta uumi-baxayaasha taasoo dadka ka dhigaysa mid aad ugu raaxeysan.
Ku socodsiinta taageerayaasha saqafyada waaweyn ee warshadaha gadaal waxay dhalisaa casriyeyn jilicsan taas oo ku qasbeysa hawo diiran saqafka oo ay hoos ugu dhacdo booska la haysto. Taageerayaasha saqafka HVLS waxay caawiyaan wareegga hawada - shaqaalahaagana way diiriyaan.